फेरी शोकमा बलिउड, ३२ वर्षका अभिनेता आशुतोषले गरे आ'त्मह'त्या - Sidha News
फेरी शोकमा बलिउड, ३२ वर्षका अभिनेता आशुतोषले गरे आ’त्मह’त्या
काठमाडौं। बलिउडमा फेरी एक अभिनेताले ३२ वर्षको उमेरमा आ’त्मह’त्या गरेका छन् । मराठी अभिनेता आशुतोष भाकरेले देह त्याग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनकारी दिएका छन् । उनी ३२ वर्षका थिए । स्रोतका अनुसार आशुतोषले महाराष्ट्रको नान्देडस्थित आफ्नो घरमा झु ण्डि एको अवस्थामा मृ, त फेला परेका हुन्।
प्रहरीका अनुसार आशुतोषको शव नान्देडस्थिती उनको बंगलामा झु ण्डि एको अवस्थामा फेला परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । आशुतोष एक महिना अघि मात्रै नान्देड आएका थिए । मराठी फिल्म इन्डिष्ट्रिमा आशुतोषको निधनले शोकको लहर छाएको छ।
आशुतोषको अचानक निधन भएको खबर उनका प्रशंसक शोकमा छन् । उनले आ’त्मह’त्या गर्नुको कारण पनि खुल्न सकेको छैन । आशुतोष फिल्म तथा टिभी अभिनेत्री मयुरी देशमुखका श्रीमान् थिए । २१ जनवरी २०१६ मा मयुरी र आशुतोष विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए।
आशुतोष इन्डिष्ट्रिमा निकै चर्चित थिए । (उनले एकर थर्ला पक्का) नामको फिल्ममा काम गरेका थिए । यो फिल्म असाध्यै चर्चित भएको थियो । मयुरी पनि मराठी इन्डष्ट्रिकी चर्चित नायिका हन् । उनले खुल्ता कलि खुले,ना बाट घर–घरमा पहिचान पाइन् । दुबैको अभिनय असाध्यै रुचाइन्छ।
बलात्कृत महिलालाई न्याय दिलाउन दुई करोडको
पञ्चायती समयमा पनि यति धेरै भ्र’ष्टा’चारका
‘मैले एक बर्षका लागि हस्तमैथुन छाडेको
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन सर्वसधारणमा उपयोग गर्न डब्ल्यूएचओको
आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग
सेल्फ क्वारेन्टिनको नियम तोड्नेलाई १५ लाख जरिवाना !
आजदेखि आम नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिन सुरु
मन दुखाएर किन बार्सामै बस्दैछन मेसी ? यस्तो रहेछ बार्सा छोड्न खोज्नुको कारण (भिडियो)
सरकारी अधिकारीले अफिसमै सेक्रेटरीसँग मस्ती गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल